Real Madrid oo fariin hambalyo ah u dirtay laacibkeeda Dani Carvajal – Gool FM
Real Madrid oo fariin hambalyo ah u dirtay laacibkeeda Dani Carvajal
(Real Madrid ) 20 Dis 2018. Real Madrid ayaa soo dhigtay website – keeda rasmiga ah qoraal hambalyo ah ee ku socota Dani Carvajal, ka dib markii uu qeyb ka noqday kulankii Kashima Antlers ee semi – finalka tartanka Club World Cup.
Dani Carvajal ayaa kulankii uu xalay ka qeyb galay ee kooxda reer Japan Kashima Antlers waxay u ahayd guushiisii 150-aad uu la gaaray kooxdiisa Real Madrid dhamaan tartamada kala duwan, kadib 216 kulan uu Los Blancos u soo ciyaaray.
Carvajal ayaa wuxuu kula soo guuleystay kooxda Real Madrid afar koob oo Champions League ah, seddex koob ee ah Club World Cup, saddex UEFA Super Cup ah, hal jeer horyaalka La Liga, Copa del Rey iyo Spanish Super Cup.
Waa xilli ciyaareedkiisii lixaad ee kooxda Real Madrid, Dani Carvajal ayaana ka qeyb galay 6 nuqul ee horyaalka La Liga wuxuuna ciyaaray 95 kulan ee horyaalka Spain, sidoo kale Champions League (34 kulan), Copa del Rey (10 kulan), Club World Cup (6 kulan), UEFA Super Cup (3 kulan).
Xili ciyaareedkii ugu fiicnaa uu la qaatay kooxda Real Madrid ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa 2013-2014, kadib markii uu guuleystay 37 kulan.
Waxaana ku xigay xilli ciyaareedyada 2014-2015 iyo 2016-2017 isagoo guuleystay 27 kulan, wuxuu xili ciyaareedkan guul la gaaray kooxda Real Madrid 10 kulan,wuxuuna dhaliyay 1 gool oo kaliya.
Neymar oo ka hadlay isbadalka ku yimid Man United, kahor kulanka ay ku wada ciyaari doonaan Champions League